isixhumi kagesi, idivayisi ngokujoyina izifunda kagesi ndawonye (ngezinye izikhathi eyaziwa ngokuthi izimbobo, plugs, noma interface). Sine nezixhumi yazo zonke izinhlobo, kuhlanganise D-sub, fibre optic, yezimoto, isiyingi, alalelwayo video, RF, Telecom, amandla, futhi-USB. Siphinde baphathe Ukukhetha enkulu isixhumi terminals amabhlogo esibulalayo, kanye backshells kanye izesekeli zonke izinhlobo.
Micro USB Isixhumi
Optical Fibre Isixhumi
Isikhumulo Block Isixhumi
XIDA Electronics uthenga ukhetho olukhulu inkumbulo chips, amakhadi kanye nezinhlelo ezikhethekile inkumbulo modules for yonke isicelo, kuhlanganise ROM chips futhi RAM dram chips zonke ezihlukahlukene, amakhadi Flash, FIFO, inkumbulo amamojuli nokuningi.
Hlunga umthamo, idatha ibhasi ububanzi, ukufinyelela isikhathi, yokusebenza voltage, emabhokisini pin count nokuningi. Thola imikhiqizo inkumbulo for ezihlukahlukene esibonakalayo izinhlobo nokufunda operation / bhala izimfuno, kuhlanganise ezimangelengele izingxenye inkumbulo. Thina isitoko imikhiqizo inkumbulo efanelekayo amaseva, Computing siqu, izicelo zokuhlala, commercial nezezimboni, nokuningi.
kudivayisi logic Ehlelwe
A logic kudivayisi ehlelwe (Pld) iyisici elekthronikhi asetshenziswa ekwakheni izifunda reconfigurable digital. Ngokungafani esangweni logic, okuyinto has a umsebenzi engaguquki, a Pld inomsebenzi esingachaziwe ngesikhathi enza. Ngaphambi Pld ingasetshenziswa wesifunda kumele zahlelwa, ukuthi, reconfigured.
Isikhathi Base Uxhumano Chip
Amandla Ukuphathwa okuhlanganisiwe Circuits
Ukuphathwa kwamandla izifunda ihlanganiswe (ukuphathwa kwamandla ICS noma PMICs noma PMU njengoba iyunithi) sekunezifunda edidiyelwe (noma block uhlelo uhlelo-on-a-chip kudivayisi) ukulawula nezidingo amandla uhlelo aphethe. Ngakho PMIC libhekisela anhlobonhlobo chips, Nokho kakhulu zihlanganisa uhlobo oluthile lwamandla electronic ukuguqulwa kanye / noma olufanele ukulawula amandla nemisebenzi. A PMIC ngokuvamile kufakwe amadivayisi ibhethri osetshenziswa ezifana Pop kanye ephathekayo abadlali abezindaba ukuze wehlise inani esanele.
AC-DC Amandla Module
DC-DC Amandla Module
Ukuthuthukiswa Regulator Chip
Amandla Gada Chip
Ukushintsha ama Amandla Ukuphathwa Chip
Voltage Izikhombo Chip
Kuvele chip analog kuyinto iqoqo miniature electronic analog izifunda kwakheka kwi yocezu olulodwa Semiconductor impahla.
I voltage zamanje amaphuzu eshiwo ezifundeni chips analog ziyahlukahluka ngokuqhubekayo ngesikhathi. Ngokuphambene, chips digital sebenzisa kuphela bese udala voltages noma imisinga emazingeni leyehlukene, kungekho amanani Intermediate. Ngaphezu Transistors, chips analog ngokuvamile ziba nenani elikhudlwana izakhi yokwenziwa (Inductor / Capacitors / resistors) kuka chips digital ngokuvamile ukwenza. Inductors bathambekele kugwenywe ngenxa yobukhulu bawo enkulu, futhi Transistor futhi capacitor ndawonye ungenza umsebenzi inductor. (Uma le ndlela isetshenziswa CFL, uthola isikebhe sizinze electronic.)
Analog chips futhi ingase iqukathe logic izakhi sedijithali isikhundla imisebenzi analog, noma ukuvumela chip ukuxhumana ne-microprocessor. Ngenxa yalesi sizathu futhi kusukela logic liphathelene eziqhutshwa yilo Mnyango usebenzisa CMOS ubuchwepheshe, lezi chips zisebenzisa BiCMOS izinqubo yizinkampani ezifana Freescale, Texas Instruments, STMicroelectronics nabanye. Lokhu kubizwa ngokuthi okuxubile signal processing eyaziwa futhi ivumela umklami ukufaka imisebenzi ngaphezulu chip. Ezinye izinzuzo zihlanganisa ukuvikelwa umthwalo, izingxenye encishisiwe ukubala nokwethembeka ephakeme.
Pure chips analog information processing ziye ikakhulukazi indawo nge chips digital. Chips Analog Namanje adingekayo amasignali wideband ngenxa izidingo izibonelo zalokho isilinganiso, izicelo amandla okusezingeni eliphezulu futhi ngesikhathi interface transducer. Ucwaningo umkhakha emkhakheni iyaqhubeka ikhula futhi bechuma. Ezinye izibonelo isikhathi eside futhi owaziwa analog chips kukhona zesikhulisa 741 Operational, kanye 555 timer.
Amandla kagesi chips nazo ibhekwa njengezwekazi chips analog. Injongo yabo eyinhloko ukukhiqiza kahle ezilungisiwe okukhipha voltage asinikeza ezinye chips ohlelweni. Njengoba zonke izinhlaba zidinga amandla kagesi, amandla supply ICS PMICs yizici ezibalulekile nalezo zimiso.
A / D Ukuguqulwa Chip
Analog Shintsha Chip
Yamanje Gada Chip
D / A Ukuguqulwa Chip
Ngo-electronics kanye nobunjiniyela bukagesi, fuse kuyinto idivayisi kagesi ukuphepha esebenzela ukuhlinzeka phezu Ukuvikelwa wamanje wesifunda kagesi. Ingxenye yayo ebalulekile kuyinto wire sensimbi noma strip ukuthi liyancibilika lapho wamanje kakhulu kugeleza, kanjalo kokuphazamisa wamanje. Kuyinto idivayisi womhlatshelo; kanye fuse aye wasebenza kuba wesifunda evulekile, futhi kufanele zishintshwe noma rewired, kuye ngokuthi hlobo.
Fuses ziye zasetshenziswa njengoba amadivayisi ukuphepha kubalulekile kusukela ezinsukwini zakuqala Ihluzo Elingafaki Ukuqoka. Namuhla kukhona izinkulungwane fuse imiklamo ezahlukene ezithinta izilinganiso eziqondile wamanje kanye voltage, breaking umthamo kanye nezikhathi, kuye ngokuthi isicelo. Isikhathi kanye yokusebenza yamanje izici fuses zikhethwa ngokuvikeleka okwanele ngaphandle kokuphazamiseka ngokungadingekile. Iziqondiso Wiring ngokuvamile ichaze esiphezulu fuse zamanje isilinganiso banakekele izifunda ethile. Izifunda iDemo, ngokweqile, imithwalo nakancane, noma ukwehluleka kudivayisi izizathu eziyinhloko operation fuse.
A fuse iyindlela ngokuzenzekelayo ekususeni amandla avela uhlelo okuyiphutha; ngokuvamile esifushanisiwe ukuze ADS (okuzenzakalelayo Ukukhipha ka Supply). Circuit amadlambi ingasetshenziswa njengendlela enye design ikhambi fuses, kodwa izici ngokuphongoza.
Fuse Isiqeshana / Isihlalo
Wireless Transmit-ukuthola Chip
Yokukhulisa umsindo / Linear Amadivayisi
-Amplifier kuyinto zobuchwepheshe ukuthi kwandisa amplitude i uphawu lukagesi. Basuke kusigaba maqondana nekhono layo indlela abangenza ngayo ngempumelelo noma zinamandla noma isignali lamanje lokufaka. A voltage amplifier icacisa amasignali voltage input bese ukhiqiza elikhulu okukhipha voltage. yokukhulisa umsindo yamanje, eyaziwa nangokuthi transimpedance yokukhulisa umsindo, bayabona imisinga ngesikhathi kokwenziwayo, futhi okukhipha zinamandla ukuba umthwalo. Transconductance futhi Transresistance yokukhulisa umsindo eguqulayo lo mphumela - i voltage input noma zamanje ukhiqiza elikhulu okukhipha wamanje noma voltage ngokulandelana.
Omunye ukusebenza ipharamitha ayisihluthulelo-amplifier kuyinto linearity yayo, noma ikhono layo ukuze simele ngokuqondile okokufaka ne isignali nesimo esifanayo kusizinda kunini okukhiphayo. Okunye imingcele ezisemqoka zihlanganisa izinga wabulala, imvamisa impendulo, umsindo, futhi inzuzo-bandwidth.
Yokukhulisa umsindo ihlukaniswa njengoba A, AB, B, C, D no E. Ikilasi limelela inani ukushintshashintsha isignali okukhipha ine phezu komunye umjikelezo uma okokufaka kuyinto umumo gagasi sinusoidal. I komugqa ngaphezulu-amplifier okungukuthi, aphansi nomkhiqizo ukuhlanekezela. Class A yilona komugqa kakhulu futhi ikilasi C okungenani komugqa. Class C asifanele izicelo audio kanye ngokuvamile isetshenziswa imikhiqizo efana RF yesimanjemanje. Amakilasi D no E kuthiwa ukushintsha yokukhulisa umsindo ukuthi ungakwazi ukusebenzisa izigaba wesifunda okukhipha equkethe resonators harmonic, amaningi ukunikezela wesitimela usuke, amasu okukhipha yokuthopha, futhi PWM futhi delta-sigma ukushintshashintsha kwezwi ukwandisa ukusebenza kahle futhi ukulakha kutsha umumo gagasi okokufaka ngesikhathi okukhiphayo.
FET wokufaka zesikhulisa
Jikelele zesikhulisa Operational
Speed ​​High Wide Band zesikhulisa Operational
Instrumentation zesikhulisa Operational
Low-Noise zesikhulisa Operational
Low-Power zesikhulisa Operational
Precision zesikhulisa Operational
Keyswitches / udlulisela
A keyswitch uhlobo inkinobho encane esetshenziselwa okhiye ikhibhodi. Lawa manje cishe ukusetshenziswa ngenxa ikhibhodi eziningi zalezi zinsuku usebenzisa amashidi plastic nge oxhumana kubo
inkinobho Key liyasetshenziswa ukuchaza inkinobho eziqhutshwa ukhiye, ngokuvamile lisetshenziswa umgqekezi alamu izifunda. A ukuthungela imoto ubuye inkinobho yalolu hlobo.
Udlulisela kukhona ukushintshwa electromechanical ukuthi kungenziwa actuated i uphawu lukagesi kunokuthi ngesandla noma uvula inkinobho. Lokhu isignali elincane uba umlindisango isiginali kagesi olukhudlwana. Ikhono ukulawula ephansi amandla phezu isignali ephezulu amandla yiso kubo izingxenye ezifana abavelele kagesi.
Shintsha Ikhono lokungacasuli
Transistors amadivayisi emithathu letheminali ingenziwa ifomu kwalapho (BJT) okuguquguqukayo, noma ngaphezulu ngokuvamile njengoba yokuthopha metal-nitrous-semiconductor (CMOS). Basuke adalwe elakhelene n-uhlobo p-uhlobo Semiconductors e noma PNP noma NPN ukumisa. Ngokuvamile zinamandla lisetshenziswa esigungwini esangweni ngokuvumela zamanje ukuba egeleza idivayisi lapho imisebenzi Transistor ngokufanayo inkinobho. Zisetshenziswa izinhlelo digital ukuze lelisu logic amasango kanye nokugcina idatha. izifunda Analog ukuzisebenzisa ukudala yokukhulisa umsindo oscillators.
A diode yidivayisi ezimbili ukuphela okukhona kuphi p-uhlobo n-uhlobo Semiconductors ngokuqondile adjoined komunye nomunye. Ukusebenzisa zinamandla okuhle kuya anode ngeke khiqiza phi zamanje abalulekile kuze embundwini voltage le diode sika weqiwe. Uma voltage embundwini weqiwe zamanje bazovunyelwa ukuthi kuqhamuke njalo anode kuya cathode kodwa diode kuzovimba ukugeleza wamanje kusuka cathode kuya anode ngaphansi kwezimo eziningi. Zisetshenziswa AC-DC Transformers, imisakazo, electro-static osenyameni (ESD) izifunda, njengoba imithombo ukukhanya, njll
Ukushintsha ama Diode
Sine resistors zonke izicelo kuhlanganise ubuso olulodwa ukukhweza, imbobo eyodwa ngokusebenzisa, trimmers, potentiometers futhi rheostats, kanye ezihlukahlukene kits, amanethiwekhi kanye afanayo, nezinye izesekeli.
A Resistor kuyinto yokwenziwa ingxenye kagesi kukhawulela noma ulawula ukugeleza zamanje kagesi ngokusebenzisa wesifunda. Lamanje ibalwa nge umthetho Ohm sika: V = IR. Ukumelana value, ukubekezelelana, futhi ngezinye izikhathi ngisho lokushisa Coefficient kungaba azimisele ngokufunda ikhodi umbala, elikhonjiswa nge- uchungechunge bands ezinemibala ohlangothini ingxenye.
Resistors ingasetshenziswa ukuze kukhawulwe ukugeleza wamanje ngokusebenzisa diode kanye sokuqeda umugqa ukuwudlulisa ukuvimbela ukucabanga. Amabili ingasetshenziswa ukwakha ehlukanisayo voltage ukuthi ikhiqiza i ezilinganiselwe okukhipha voltage amagugu ukumelana. A jikelele-njongo okokufaka / okukhipha (GPIO) transceiver ungaba okhiqizwayo esabekwa elikhulu wokudonsa phezulu noma ukudonsa phansi Resistor ukuthi sibhalwe ngaphezulu lapho GPIO iba esebenzayo.
Resistors zidalwe usebenzisa ezihlukahlukene izinto, kuhlanganise i-carbon esiyinhlanganisela, carbon ifilimu, ifilimu okusansimbi wire isilonda. Umthengi electronics zidinga ukuba ibe amancane enembile, kuyilapho izicelo ezimbonini kungadinga ukuba bakwazi kwakuqeda esiningi namandla, ngakho bagcina emikhulu.
Yamanje Eqonda Resistor
Direct Plug Ekhethekile
LED Isibani Resistor
Ukulamula Ultra-ongaphakeme Ukumelana Resistor
Precision Ukumelana ashintshekayo
Izacile Film Precision Chip Resistor
Wire isilonda Resistor
Ibhaza / Isilawuli / MIC
A ibhaza noma beeper kuyinto mkhosi idivayisi yomsindo, okungase mechanical, electromechanical, noma piezoelectric (Piezo ngamafitshane). Ukusetshenziswa okuvamile buzzers futhi beepers phakathi amadivayisi alamu, izikhathi, futhi isiqinisekiso kokufaka komsebenzisi ezifana ngokuchofoza mouse noma keystroke.
Isilawuli yidivayisi electromechanical oveza umsindo. Kuhlanganisa Ikhompyutha isikhulumi, Digital isikhulumi, electrostatic ilawudispikha, ebanga Okugcwele isikhulumi, Uphondo ilawudispikha, Isikhulisazwi, Magnetostatic ilawudispikha nokunye.
Microphone i Converter amandla oguqula amasignali umsindo ibe amaza kagesi.
Kuvele ibhethri kagesi yidivayisi ehlanganisa eyodwa noma ngaphezulu amaseli electrochemical nokuxhumana kwangaphandle enikeziwe ukuze amandla amadivayisi kagesi ezifana amathoshi, Smartphones, futhi izimoto kagesi.
Amabhethri akheke ngezindlela eziningi nosayizi, amangqamuzana miniature wasebenzisa amandla izinsiza-kuzwa namawashi lincane, amaseli mncane esetshenziswa Smartphones, ukuze enkulu phambili acid amabhethri esetshenziswa izimoto namaloli, futhi ngaleso kakhulu ngobukhulu, omkhulu ibhethri amabhange usayizi amakamelo ukuthi ahlinzeke eceleni noma amandla okuphuthumayo ngocingo Ukuhwebelana izikhungo idatha kwikhompyutha.
isizinda Ibhethri Ibhokisi / ibhethri
Capacitors Uyi yokwenziwa ingxenye kagesi nge terminals ezimbili ukugcina amandla kagesi ngesimo inkambu kagesi. Terminals axhunyiwe emapuletini ezimbili conductive ukuthi abe impahla Kwe-dielectric Heating phakathi kwazo. Bona sigcine icala zikagesi ku emapuletini abo conductive. Lezi zingqimba icala ahlukaniswe okokusebenza Kwe-dielectric Heating ukudala i ensimini kagesi.
Capacitance liyipharamitha ka capacitor elikhombisa inani egcinwe kagesi ngoba zinamandla inikezwe isetshenziswa ezikhumulweni yayo. It is kulinganiswa ngo farads (F). Ngokwesibonelo, Ukubuyelela kabili capacitance ngeke double egcinwe kagesi (elinikeziwe voltage njalo kumatheminali).
Capacitors ihlukaniswa esekelwe izinto ngokomzimba esetshenziselwa emithathu ungqimba umqhubi Kwe-dielectric Heating umqhubi isakhiwo. Ngokwesibonelo, labo zensimbi Kwe-dielectric Heating electrolyte izinto abizwa ngokuthi capacitors electrolytic; metal isizinda Ceramic abizwa ngokuthi capacitors Ceramic, njll Labo ukuthi non-lihlukaniswe kungase kuhlotshaniswe noma ukuba voltage emihle noma emibi. Uma kunjalo athuthukisiwe kufanele ixhunywe voltage omuhle, ukuphela omuhle limakwe kwi isembozo.
A crystal oscillator kuyinto electronic oscillator wesifunda osebenzisa resonance mechanical crystal isixwayisi yezinto ezibonakalayo. piezoelectric ukudala i uphawu lukagesi nge imvamisa eqondile. Lokhu imvamisa ivame lokhozi zalesi sikhathi, njengomkhaya e asebenza ngebhethri namawashi, ukunikeza isignali esitebeleni iwashi izifunda digital ehlangene, futhi ekulinganiseni amaza ngoba amagagasi omoya kanye abamukelayo. Uhlobo oluvame kakhulu elalinembobo piezoelectric esetshenziswa iyona crystal asebenza ngebhethri, ngakho oscillator izifunda zokuhlanganisa kubo waziwa ngokuthi crystal oscillators, kodwa ezinye izinto piezoelectric kuhlanganise polycrystalline zobumba asetshenziswa izifunda efanayo.
A crystal oscillator, ikakhulukazi lowo owenziwe asebenza ngebhethri crystal, usebenza ngokubhapathizwa zonakaliswa inkambu kagesi lapho voltage lisetshenziswa i electrode eduze noma kwi crystal. Le mpahla is njengoba electrostriction noma piezoelectricity ephambene ezaziwayo. Lapho le nsimu lisusiwe, asebenza ngebhethri - okuyinto oscillates e imvamisa eqondile - yakha i ensimini kagesi njengoba ubuyela ezakheke langaphambilini, futhi lokhu zingakwazi ukukhiqiza amandla kagesi. Umphumela uba ukuthi crystal asebenza ngebhethri oziphatha njengongqingili i wesifunda RLC.
Quartz zinhlayiya ekhiqizwa ngoba amaza kusukela emashumini ambalwa kilohertz emakhulwini megahertz. Zinhlayiya abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezimbili ekhiqizwa ngonyaka. Iningi asetshenziselwa amadivayisi umthengi ezifana namawashi, amawashi, imisakazo, ama-computer, omakhalekhukhwini. Quartz zinhlayiya atholakala ngaphakathi ukuhlolwa kanye nesilinganiso imishini, njengezinto zokubala, isiginali ugesi, oscilloscopes.
Emqulwini Crystal oscillator
Ukulamula Active Crystal oscillator
Ukulamula Passive Crystal oscillator
Inductors / Ubuhlalu Magnetic / Transformers
Kuvele inductor ebhaliwe, ebizwa nangokuthi i-ikhoyili, binda noma ophendulayo, kuyinto yokwenziwa ezimbili ukuphela ingxenye kagesi eligcina amandla e kazibuthe lapho kagesi kugeleza ke. Kuvele inductor ngokuvamile siqukethe ukushisa namakhaza wire isilonda ibe ikhoyili emhlabeni core.
ubuhlalu Magnetic zenzelwe ukucindezela okusezingeni eliphezulu umsindo imvamisa futhi spike ukuphazamiseka ku Isignali ye-imigqa, izintambo zikagesi, futhi zimunce pulses electrostatic. ubuhlalu Magnetic asetshenziswa ukuncela amasignali UHF, njengamanye izifunda RF, PLL, izifunda oscillating, futhi ultra imvamisa high inkumbulo izifunda (DDRSDRAM, RAMBUS, njll), okuyinto udinga ukwengeza ubuhlalu kazibuthe engxenyeni uvo we kwamandla. I bead kazibuthe has resistivity okusezingeni eliphezulu futhi permeability, okulingana ukumelana kuqondane and inductance, kodwa ukubaluleka ukumelana naso futhi kwenze inductance ukubaluleka ziyahlukahluka nge imvamisa.
Transformers zimane inductors ezimbili elihlangana eqinile mutual phakathi kwabo. Shiya phansi Transformers ukunciphisa voltage kusukela okokufaka amandla umthombo i amplitude ukuthi kuyingozi kancane futhi ngaphezulu okungokoqobo amabhizinisi kanye nasemakhaya. Transformers Isinyathelo-up ukwandisa voltage yokudlulisela iyashelela olude kwamandla imigqa. Transformers kubalulekile ukusatshalaliswa AC.
Chip Magnetic sobuhlalo
Direct sobuhlalo Magnetic
Okuphansi Frequency Inductor
Amathuluzi kanye Amamitha
XIDA electronics uzibophezele ekuhlinzekeni ezintsha unlimited amakhasimende emhlabeni wonke ezahlukene ezingaphezu imikhiqizo engabizi ubuchwepheshe. siye umkhankaso ngempumelelo ezimakethe zomhlaba ka multimeter digital, instrumentation yezimoto, kagesi ukuhlolwa ithuluzi, ukuvikeleka kwemvelo futhi ezishisayo ukuhlaziywa Instrumentation, ukuphepha Instrumentation, umhloli jikelele, Kukala, kwakha Samandla amathuluzi kanye digital isitoreji oscilloscopes nezinye 10 anhlobonhlobo izigaba ezinkulu imikhiqizo, bese uqhubeke ukwenza uchungechunge umkhiqizo diversification, futhi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo eziyingqayizivele amaklayenti ezahlukene.
Circuit Breaker Uzitholele
Uphiko Testing Amathuluzi
Digital Ngocingo Amamitha
Kagesi Ukufakwa Abahloli
Emandla agesi Amathuluzi
Aphathwayo Digital Storage Oscilloscopes
Industrial Digital Ngocingo Amamitha
Isakhiwo nokuMeda Amathuluzi
Amandla Quality Analyzers
Voltage Ukuqhubeka Abahloli
umumo gagasi generator
Ngokuvamile Izinzwa awela esisodwa sezigaba ezine ezilandelayo:
A ingcindezi inzwa ngokuvamile alinganise ingcindezi gas noma uketshezi. Basebenta by odala isignali electronic ngenxa ingcindezi elakhiwe njengoba umsebenzi ibutho liyadingeka ukuyeka uketshezi noma igesi kusuka uyanda. Nokucindezelwa izinzwa nazo ngokuvamile okuthiwa ingcindezi transducers, ingcindezi omoya, piezometers nokucindezelwa izinkomba, phakathi kwezinye amagama. Basuke ngokuvamile asetshenziselwa ukulawula kanye nokuqapha izinhlelo zokusebenza.
Ukunyakaza kanye Isikhundla izinzwa
Abamangali nesikhundla inzwa ivumela nesilinganiso isikhundla, noma ngokuya ngokuphelele (ngokuphelele isikhundla inzwa), noma ngokoMthetho isihlobo (inzwa isihlobo noma ukufuduka). Ukunyakaza noma isikhundla izinzwa akwazi ukukala ukuthi isikhundla komugqa kudivayisi (lwento isikhundla inzwa), emincane isikhundla izinguquko, kanye multi-eksisi isikhundla izinguquko. Phakathi ethandwa kakhulu ukusetshenziswa ku kokungagqokwa kanye aphathwayo IoT amadivayisi accelerometer futhi gyroscope izinzwa.
izinzwa Optical ukuguqula ukukhanya okulokozayo, noma ushintsho ukukhanya, ibe isignali electronic okungukuthi efundeka ithuluzi. Lezi izinzwa, obizwa nangokuthi izinzwa Photoelectric, kukhona ke akwazi ukuba khona futhi khona positional bento. Izinzwa Optical ezincane ezisetshenziswa ngezindlela ezihlukahlukene ezishintshayo izicelo ezimbonini kanye nemikhiqizo bezentengiselwano. Phakathi ezithandwa kakhulu fibre optic izinzwa, ukusondela izinzwa, kanye nokuphepha ukukhanya kwesihenqo izinzwa.
izinzwa Thermal amadivayisi ukuthi ikhiqiza uphawu lukagesi ekuphenduleni lokushisa noma ushintsho lokushisa. Ziyakwazi ebalulekile ngoba izicelo ezimbonini ezidinga impendulo ukulondoloza elilungile izinga lokusebenza ububanzi. Noma yimuphi ukufundwa phezu-lokushisa Ungakwazi ke kuholele ukuvalwa kwama-umshini ukunweba ukuphila futhi silondoloze ephephile emsebenzini imvelo. Izinhlobo ezimbili eziyinhloko izinzwa ezishisayo kukhona lokushisa izinzwa kanye nomswakama izinzwa.
Inzwa yesibani esizungezile
Abashayeli kukhona omoya ozinikele. Basuke elungiselelwe ukushayela ubuchwepheshe ikakhulukazi umndeni noma zokuxhumana ezijwayelekile futhi lula Umklamo uhlelo emikhulu Ukusebenzisa zonke yezifiso olufanele kanye nezidingo kagesi. Ngokwesibonelo, umshayeli LED offloads high zamanje umthombo / echibini izimfuno ezivela CPU / AP GPIOs futhi ungene ingxenye umshayeli. izingxenye Interface ingaqukatha abashayeli kanye abamukelayo (ama-transceivers), okuyizinto izakhi enemisebenzi engasetshenziswa ukuqala Uxhumano lwenethiwekhi futhi senze njengoba ukuphinda.
High Driver yamanje
Embedded Chips neuropathy
Port Isandiso chip
Ngo-electronics, i opto-isolator ebhaliwe, ebizwa nangokuthi i-optocoupler, photocoupler, noma isolator optical, kuyingxenye ukuthi idlulisela yezinzwa phakathi izifunda amabili angawodwa ngokusebenzisa light.Opto-isolators ukuvimbela voltages okusezingeni eliphezulu kusuka ezithinta uhlelo ethola signal.Commercially etholakalayo opto-isolators ukumelana okokufaka i-okukhipha voltages abafika kwabangu-10 kVand voltage transients nge ngesivinini-25 kV / μs.
Uhlobo ezivamile opto-isolator siqukethe LED kanye phototransistor iphakethe efanayo opaque. Ezinye izinhlobo yomthombo-inzwa inhlanganisela zihlanganisa LED-photodiode, LED-LASCR, futhi isibani-photoresistor ngazimbili. Ngokuvamile opto-isolators ukudluliswa digital (on-off) signal, kodwa ezinye amasu ubavumele ukuba kusetshenziswe amasignali analog.
Khanyisa Diodes likhipha ukusebenzisa okuqinile-isimo ukukhanyisa ubuchwepheshe ukukhiqiza ukukhanya ngokusebenzisa ndaba okuqinile, indlela ebalulekile eyaba Semiconductor. Lokhu kuwabeke kweminye imithombo ukukhanya ezifana incandescent ama (ngokusebenzisa cleaner) noma Fluorescent compact ama (ngokusebenzisa igesi). Mshini eyisisekelo ukukhiqizwa ukukhanya uyagijima Band-to-Band recombination noma ngemisebe.
Isikhala seso Receiver
Isibonisi se-LCD Module
Khanyisa likhipha Diodes
OLED Khombisa Module
Photoelectric Solid-isimo edluliselwe